Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Rafa Silva Childhood Story Plus Ihe Ndi Utold Biography Eziokwu
Akụkọ ndụ anyị nke Rafa Silva na-agwa gị eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Oge mbido ya, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka (Claudia Duarte), Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke ndị na-asụ Portuguese nke Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa mbido. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na AC Milan. Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị nke Rafa Silva's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise nke ndụ ya.
Ndụ na ịrị elu nke Rafa Silva.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọmarịcha njikwa bọọlụ ya, ọsọ ọsọ ya na-atọ ụtọ na oke ịgba ọsọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Rafa Silva's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Rafa Silva Childhood - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha ahụ “Ndị Portuguese Eden Hazard". Rafael Alexandre "Rafa" Fernandes Ferreira da Silva mụrụ na 17th ụbọchị nke May 1993 na Forte da Casa na Portugal. Amuru ya nye nne nke aha ya agaghi ezere igwe nyocha rue mgbe ebighi ebi, na nna ya - Joao Silva.
Ndị nne na nna Rafa Silva.
Agbụrụ agbụrụ ndị Portuguese nke agbụrụ ọcha nwere obere mgbọrọgwụ mara n'obodo ya - Forte da Casa, ebe ekwuru na echepụtara ụdị achịcha dị iche iche. Agbanyeghị, nwa na-eto eto Silva tolitere dị ka nwatakịrị na - adịghị mma nke na - eche na ọ ga - egbochi ya ịgba bọọlụ ma sonye n'egwuregwu ọ bụla ruo mgbe ọ mere agadi 10.
Akụkọ Rafa Silva Childhood - Agụmakwụkwọ na Ọrụ:
Ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ egwuregwu União Atlético Povoense - 3 kilomita site na Forte da Casa - na Silva weere nzọụkwụ mbụ ya na football, ọrụ ọ gbakọtara na nchụso agụmakwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Santa Maria da Feira.
Ka ị na-egwu Povoense, onye dị afọ 10-11 dị afọ iri na ụma tụpụrụ ma sọpụrụ ndị na - agbachitere otu ndị ọzọ na - ekwenyeghi na ọ ga - emesi ha ọsọ, dribbling na gbaa ọkụ.
Ndị na-eto eto na-azụ ọzụzụ na União Atlético Povoense ebe Rafa Silva mere nzọụkwụ mbụ ya na football.
Akụkọ Rafa Silva Childhood - Akụkọ gbasara Ndụ Mmalite:
N'ịbụ onye nọrọla otu afọ na-amụta ihe ndị gbasara bọl na nka nka na ụlọ akwụkwọ egwuregwu União Atlético Povoense, Silva gara Futebol Clube de Alverca ebe o nwere ọtụtụ afọ nke ọrụ ntorobịa ya.
N'etiti oge 7 njem ya na klọb, Silva nwetara ibu dị ùgwù nke gbochiri ndị na-emegide ya ịghara ileda ya anya. Agbanyeghị, akara dị nso a dabara na ike ọ lụsoro ya.
Foto nwatakiri nke Rafa Silva na Futebol Clube de Alverca.
Rafa Silva Childhood akụkọ gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Nwa nwoke dị afọ 18 gara n'ihu ịbanye na CD Feirense nke mere ka ọ ghara ịkwalite nkwalite ya site na otu afọ ka emere ya ka ọ kpọọ na usoro ntorobịa nke klọb maka oge 2011-2012 niile.
N'oge na-adịghị anya, Silva nwetara nkwalite ma mee ka ọkachamara ya na nke mbụ ya na mmeri ụlọ 2-1 megide FC Penafiel. Agbanyeghị, ọ nweghị ahụ iru ala na-egwu klọb nke ọ chere na ọ nwere ike igbu oge ya.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke Rafa Silva na-egwu maka CD Feirense.
Rafa Silva Biography Eziokwu - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
N’ihi nke a, Silva egbughị oge n’ichebe onwe ya gaa na SC Braga ebe ndị isi nọchiri anya ndị wulitere otu egwuregwu gbara ya gburugburu. Mmezu ya dị egwu ya na Braga gụnyere iduga ndị otu ahụ ruo ọkara nke 2016 UEFA Europa League yana mmeri na 2016 Taca de Portugal Final.
Ọganihu ngwa ngwa na ụbọchị Silva bụ onye na-egbu ihe na Benfica na-awakpo ndị agha na-akwụsị ịkwụsị mmeri nke ndị egwuregwu bọọlụ na ndị isi yana ndị iro ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Rafa Silva bụ otu n'ime ndị mwakpo Benfica n'oge ederede.
Ndụ mmekọrịta Rafa Silva na Claudia Duarte:
N'azụ egwuregwu bọọlụ ọ bụla bụ enyi nwanyị na-akwado nkwado. Ihe njiri mara ahụ jidere ndụ ịhụnanya nke Rafa Silva na wag nke ya mara mma aha ya bụ Claudia Duarte.
Rafa Silva ya na enyi ya nwanyi Claudia Duarte.
Agbanyeghi na amaghi ihe banyere mgbe lovebirds zutere, ha ekpebiri onwe ha ka ha buru ndi zuru oke nke ihunanya ha ka bikoro n’ule nke oge. Ọ dị mma ịmara na duo alụbeghị di na nwunye n'oge edere, ha enweghịkwa nwa nwoke na ụmụ nwanyị n'abụghị.
Ndụ Rafa Silva:
Ezinụlọ abụghị naanị ihe dị mkpa nye Rafa Silva, ọ bụ ihe niile. Anyị na-akọwapụta eziokwu banyere ndụ ezinụlọ ya.
Banyere nna Rafa Silva: Joao Silva bụ nna Rafa. Joao bụbu onye na-ese anwụrụ anwụrụ anwụ ruo mgbe Silva mere ka ọ kwụsị site na ị nweta ọtụtụ ebumnuche dịka ọchịchọ nke nzọ ha abụọ kwetara. Ndị duo ahụ enweela ezigbo mmekọrịta nna na nwa nwoke ma na-eje ozi dị ka ndị nwere mmetụta dị mma na ibe ha.
Banyere nne Rafa Silva: Amabeghị ihe banyere mama Silva n'oge edere. Ka o sina dị, ọ bụ otu n'ime ndị kachasị mkpa na obi Silva ma na-arụ ụka na ọ bụ onye kachasị mara mma nke ezinụlọ onye na-eti ihe.
Rafa Silva na ndị nne na nna na-akwado ya.
Banyere ụmụnne Rafa Silva: Silva tolitere na nwanne nwoke nke okenye mara dị ka Jose Silva. Themụnne nwanne na-ele anya n'ọtụtụ ụzọ ma nwee ike mehie maka ejima. N'ịkọ Jose, ọnweghị okwu doro anya banyere nwanne ndị ọzọ.
Rafa Silva ya na nwanne ya nwoke Jose.
Banyere ndị ikwu Rafa Silva: Enweghi ndekọ ọ bụla banyere nne na nna ochie na nne nne, ma nwanne nna ya, nwanne nne ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya ndị nwoke mara n'oge edere.
Ndụ nke Rafa Silva:
Know mara na Silva nwere ọdịdị nke ụwa mgbe ọdịdị onwe ya na-egosiputa akara nke Taurus Zodiac? Ọ dị omimi, nwee ezi uche, nwee nsọpụrụ na onye adịghị ahụ ekpughere ozi banyere ndụ ya na nke onwe ya.
Onye na-egwu ihe nkiri ahụ nwere ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ na ntụrụndụ ndị gụnyere ịgụ akwụkwọ, ịkụ nzọ egwuregwu, foto, igwu mmiri, ihe nkiri, ile anya, na-ekiri ihe nkiri na iso ndị enyi ya, ezinụlọ na nkịta na-egwuri egwu.
Rafa Silva na nkịta ya na-etinye oge dị mma.
Ezigbo Ndụ Factsmụaka Rafa Silva:
Ọnụ ahịa ahịa Silva nke € 28 Million - n'oge ederede - na-enye nghọta maka ụgwọ ọnwa ya kwa afọ ma na-enye ngwaọrụ maka ịtụle ọnụọgụ akụ ya nke a na-enyocha n'oge edere.
N'aka nke ọzọ, ụdị ndụ okomoko nke Silva gosipụtara n'ezighi ezi obi abụọ na o wulitela ego siri ike site na ịgba bọl, ebe ụdị ejiji ya na ebe ọ họọrọ maka ezumike na-egosi ya dị ka nnukwu onye mmefu, n'agbanyeghị eziokwu ụlọ ya na ụgbọala amabeghị.
Uwe ejiji na ejiji Rafa Silva na-ekwu okwu banyere ego o ji emefu ego.
Rafa Silva Eziokwu bụ eziokwu:
Kedu ka ị dị mma Rafa Silva karịa ihe edere banyere ya na bio a? ebea bu ezigbo ama amaghi ma obu okwu akachaghi anya banyere onye n’agba egwu.
Okingụ sịga na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ :ụ: Silva ahụghị ị smokingụ sịga n'anya ma gafere ọtụtụ kilomita iji mee ka papa ya kwụsị omume ahụ. Agbanyeghị, amabeghị ma ọ na-enwe ekele maka ị asụ mmanya n'ihi na a hụbeghị ya ka ọ na-eme mkpọtụ ma ọ bụ na-a drinkingụ mmanya n'ụzọ na-enweghị isi.
Ogbugbu: Onye na-eme ihe nkiri ahụ hụrụ egbugbu n'anya ma nwee nkà n'ahụ ya abụọ. Agbanyeghị, ọ ka ga-ekwu ihe ọ pụtara n'azụ ha, emebeghịkwa foto nke ọma iji chọpụta ihe kpatara egbugbu ahụ.
Ihe onyonyo nke egbugbu Rafa Silva.
Religion: Amabeghị ihe banyere okpukpe Rafa Silva n'oge edere n'ihi na ọ hapụghị ihe ọ bụla akọwapụtara n'okwukwe ya. Moreso, ndị mba Portuguese anaghị akụ ndị Fans na ndị nta akụkọ dị ka okpukpe n'oge ajụjụ ọnụ.
Ihe kpatara aha aha Silva: A kpọrọ Silva “Portuguese Eden Hazard”N'ihi na ihe mgbaru ọsọ ya na ohere imepụta ikike yiri nke ndị ọkpụkpọ Belgium.
Nyochaa: Ekele dịrị gị maka ịgụ akụkọ ihe mere eme nwata anyị bụ Rafa Silva. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.